Guddoomiye Cabdi Xaashi oo magacaabay guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi +(AKHRISO) | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Guddoomiye Cabdi Xaashi oo magacaabay guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi +(AKHRISO)
Guddoomiye Cabdi Xaashi oo magacaabay guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi +(AKHRISO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Golaha Aqalka ee Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa Sabtida maanta ah magacaanbay guddiga doorashooyinka xildhibaannada gobollada Waqooyi.
Xubnahaan ayaa ka kooban ilaa 8 xubnood oo qaban doona doorashada gobollada Waqooyi kasoo galayo baarlamaanaka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa horay u magacaabay xubnaha Guddiga doorashooyinka Gobollada Waqooyi, inkastoo Cabdi Xaashi uu ka soo horjeestay guddigaasi.
Lama oga sida guddigaan ay ku shaqeyn doonaan, maadaama Xukuumadda aysan raali ka aheyn magacaabista xubnahan uu soo magacaabay Cabdi Xaashi.
Haddaba qeybta hoose ka akhriso qoraalka ka soo baxay guddoomiyaha Aqalka sare ee Soomaaliya:
xildhibaanada gobolada waqooyi